Raharaha “kidnapping” 200 tapitrisa Ar ho an’izay mahita an’i Lama
Nanatontosa valan-dresaka momaba ilay fakana an-keriny an’I Anil Karim mpandraharaha karana mpamongady fanafody niseho ny 27 aprily 2020 teo teny Ambatobe ny Jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka Kaomandin’ny
Zandarimariam-pirenena ny 30 aprily 2020. Fantatra fa Ramandiamanana Norbert na “LAMA”, mpamerin-keloka ikoizana amin'ny asa fakana ankeriny ka efa notadiavina an-taona maro, no anisan'ny nahavanona io fakana ankeriny io, hoy ny fanazavany. Karohina fatratra araka izany izy ankehitriny. Tambiny 200 tapitrisa ariary no homen’ny fanjakana amin’ny alalan’ny zandarimariam-pirenena ho an’izay manome loharanom-baovao ho fisamborana io olona io. Mahavita Tosika Fameno ho ana olona 2000 io volabe io. Tanana ho tsiambaratelo ny mombamomba izay manome vaovao ary tsy maintsy arovana. Manao antso ny zandarimaria ho an’izay mety mahafantampantatra na mety mahafantatra na koa mety mahita trangan-javatra hafahafa any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any mba hampandre haingana ny Mpitandro filaminana. Izany dia mba ahafahana manao ny hetsika avy hatrany sy handraisana fepetra. Ny fampiantranoana ireny olona ireny dia raisina avy hatrany ho mpiray tsikombakomba amin'izy ireo, hoy ny zandarimariam-pirenena.